TJJ TV | Trini Jungle Juice TV - Jungle Juice - Let the Juice flow... Caribbean Entertainment at it's best!
Introducing Jungle House's new Fresh Pure Honey Juice range! Available at our following stores: Mid Valley D Pulze Pavilion Sunway Pyramid Bringafriend with you to enjoy this healthy and delicious honey based drink! Simply show this promo code [JUNGLEDELIGHTS] to one of our friendly staff to redeem this promo. See you there!
Jungle Juice Bar Sweden
Cravetogo Franchise PH
PROMO❗PROMO❗PROMO❗PROMO❗ 80% FOR ONLY 12,888 SAAN MAKAKARATING ANG IPON MO? SA PANAHON NGAYON, NEGOSYO ANG KAILANGAN MO ‼️ Our NEW Packages PROMO 1: 14,888 (10IN1) MEALTIME EXPRESS PROMO 2: 13,888 (8IN1) AMAZING DELIGHTS PROMO 1: 12,888 (7in1) SNACKPACK ✔️Guaranteed with after sales service ✔️With very competitive products ✔️With own COMMISSARY ✔️Flexible ✔️30-50% profit margin ✔️ NOT NETWORKING, TRADITIONAL BUSINESS ONLY COMBO PACKAGES TO BE SUPPLIED Shawarma Buy 1 Take 1 8Siomai Time Buy 1 Take 1 Crazy Burger buy 1 Take 1 Fries Par-Tea Senior Sisig Pan Fry noodles MealsaMinute Jungle Waffle Moja Pao MealsaMinute MilkTea Pol Scramble Lemon fresh Juice Buko Shake Mix and Match ✅All in Package ✅NO Hidden Charges ✅NO Royalty Fee and ✅NO Sales Quota SARILING NEGOSYO, SIMULAN MO NA! INTERESTED⁉️ Message us for more DETAILS❗ Look for Ms. Camille Apo 09752935727 - Globe 09077693644 - Smart Franchise Manager
Jungle Juice Mcc/Dcc
08/29/20 - ZOOM iN - Summer of Soca – Big Fete Ending Edition featuring the World’s Best Soca Artists and Djs!! Register now! www.zoominfete.com or at www.zoominfete.eventbrite.com . Voice Nailah Blackman Tallpree Yannick Hooper Caribbean Steelpan Connextion Ensemble Barrie Hype Ryan Sayeed B2BEnterprise Freeze International Barney Millah Hendrik Unltd Soca Twins DJ JEL DJSpicenyc Lady Drea Sentinel Sound D'Enforcas DJ PAYOU Dj Fearless Kevon DJ Tate DJ MVCK "The French Soca Touch" Stanman & Soso | LARGE RADIO Smallislandmassive Dj Lbee Sensi Movement D' Soca Lyon Fiber Fbr Rockstone Soca VS Dancehall Trini Jungle Juice TeamSoca.com Ubersoca Cruise Riddimstream . . #summerofsoca #sos #zoominfete #zoomin #socatwins #rockstone #soca #socaworldwide #socaunity #onlinefete #dancehallmusic #carnivalparty #trinidadcarnival #carnival #eventbrite #soca2020 #voicetheartiste #nailahblackman #tallpree #yannickhooper #caribbeansterlpanconextion #freezeintl #back2basics #dutchsocalovers #barneymillah #barriehype #sentinel #teamsoca #carnivalfever #carnivalexplosion
London is calling! REGISTER NOW! KiNG BUBBA & TRiNiBOi JOOCIE ready Zoom-in-Fete Trini Jungle Juice Soca vs Dancehall Soca Twins TeamSoca.com King Bubba FM DJ STAKZ Triniboi Joocie DJ Triple M Sun Bailante Carnival Parties London DJ Tate ReleaseDRiddim Credable JUST VIBEZ QT2Hype SOSEnt:UK Rockstone DJ Seagel Silver Flagz Soca Fete Majikal UK @DEEJAY CHRIS VEE Team Foxx Music Flagz Sound Dreamland Jouvert @Fiber Fbr Soca vs Dancehall Aruba Socaholic
HOMESICK Purchase here https://www.riddimstream.it/homesick Youtube Video: https://youtu.be/TeRCWh7WueQ MUSIC CREDITS : Ricardo Drue - Homesick ( Soca 2020 ) Written by : Ricardo Drue, Lyrikal, Kit Israel, Emanuel Rudder and Dale Ryan Produced by : Mr Roots for Wiz Records Brass - Allstar Brass Mixed by : Nikholai Greene Mastered by : Nikholai Greene HOMESICK VIDEO CREDITS : Executive Producer: Dolla Cham Directed by : Navindra Harbukhan Camera : Lord Edit Edited by : NH PRODUCTIONS TT Additional Homesick Footage by : Adam O Dj Stephan Dj Jester Myst Carnival Mr Roots Sher Kharma 13 SpydamanX Trini Jungle Juice Willy Chin Chaso
Profitez dès maintenant du plus puissant blender au monde avec plus de 70% de réduction
Profitez dès maintenant du plus puissant blender portable ! Jungle Juice N°1 en France !
Bénéficiez de 70% de réduction sur le plus puissant blender au monde, vendu par Jungle Juice marque française !
East Drinks West presents another summer of Poolside ~ Craft Beer Pool Parties Craft beer x Cocktails x Beer Bellies x Bikinis The summer is here, at least it feels like it with this heat! And East Drinks West will be taking over the Road Castle Water Park in Taipei for another summer of Poolside Pool Parties with Craft Beer, Cocktails, Music, Street Food, Waterslides, Beer pong, Bikinis and Beer Bellies… What could be better?!?! Happy Hour 12-2PM. Check out details below! See you POOLSIDE! We will be checking temperatures at the pool, and if anything changes we will post in the event immediately. We want to make sure everyone stays safe this summer, while we enjoy ourselves Poolside! Over the summer we're going to be launching 80+ new craft beers, as well as throwing downafew new cocktails on draft... and tons of fun shots! AND we're teaming up withafew of Taipei's best street food vendors to bring some tastes from around the world! Pool Party Dates ~ We have almost every Saturday booked from May 16th to September 26th, withafew twists to the usual theme. Stay tuned for the themed pool parties! ————★ The Food ★———— ☞ More Info Coming Soon! ** If you are interested in havingafood booth with us please contact the page! We're always looking for new food to join our team! ** ————★ The Drinks ★———— HAPPY HOUR 12-2 ☞ 100NT BEERS! ☞ 100NT Cocktails ☞ Buy 1 Get 1 FREE Shots Craft Beer ☞ More Info Coming Soon! Cocktails on Tap ★ 150nt ALL DAY LONG ★ ☞ Jungle Juice Shots ★ 100nt ALL DAY LONG ★ ☞ Tequila ☞ Fireball Beer Pong ☞ We'll be rockin' the Beer Pong table all day long! _____________________________________ ☞Door 350NTD ☞Includes full waterpark access ☞ What to bring? Sunscreen, bathing suit, towel. No outside alcohol or outside food permitted. This event is family friendly! 夏季Party 注意清單 ⚠️防曬乳，係數要高/要防水 ⚠️泳衣(泳衣)，要穿辣一點也可以喔！ ⚠️不能帶其他酒精、場外食物，多多支持我們，以後才會常有活動！ ⚠️親子也可以參加，有適合小朋友的食物、飲料！ _____________________________________ Events like this wouldn't be possible without support from our sponsors. Check them out! _____________________________________
This isareal Texas jungle juice recipe! This will light up your party!
Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε μία από τις τελευταίες μας παραγωγές, currently # στο YouTube! Ο N.O.E σε συνεργασία με τη Jungle Juice Records και τη Cobalt Music επέλεξαν τα Sweetspot Studios τόσο για την επεξεργασία του ήχου, όσο και για τα γυρίσματα του νέου του video clip, “ΤΡΕΛΕ” Απολαύστε τον εκρηκτικό N.O.E. στο νέο του hit single! Follow us: Sweetspot Productions Yiannis Stavros Dimitris Team SweetSpot #TrendingOnYouTube #SweetSpotProductions https://www.youtube.com/watch?v=LaX858gifDs&feature=youtu.be&t=63
Wasssuuup Pacific Beach! Tomorrow, we're throwing down the dopest 90s throwback bar crawl and gonna party like it's 1999! We're taking over the bars in PB and gettin' jiggy with it this February to some throwback 90s jams! Think this is another boring bar crawl? AS IF! WRISTBAND GETS YOU: [Est. Value of $50] 1 FREE drink ticket️ 1 Entry to the scavenger hunt forachance to win $1,000 ● 1 rad color-changing cup ● $3-$6 Retro drink specials ● $5-$8 Food specials at participating bars ● 90s Music at participating bars ● Professional Photography ● Custom bar crawl map texted to you ● No cover at all7bars ● An amazing crowd of 1,000+ other locals ● Access to the official 90s afterparty at El Prez VIP GETS YOU: ● Everything above ● Plus skip the line at registration DETAILS: The 90s Bar Crawl kicks off at 3pm this year! Come get your pics taken, pick up your wristbands, and pick up your complimentary 90s shot at check-in. We're expecting over 1,000 attendees this year so expect tickets to sell out. At 5:01pm, everyone will be texted their group’s bar crawl route including bars, drink specials, and bucket list challenge items. 90s Retro specials will last all day from 3pm until 10pm for those with wristbands. The winner of the PB 90s Scavenger Hunt will win an exclusive grand prize of $1,000 cash compliments of Citymixr. At 10pm there will be an official afterparty at El Prez! PARTICIPATING BARS ✖️ Firehouse (check-in) ✖️ Backyard Kitchen & Tap ✖️ Break Point *just added* ✖️ PB AleHouse ✖️ Waterbar ✖️ El Prez (afterparty) DRINK SPECIALS Firehouse Pacific Beach *Complimentary Checkin 90s Shot* $5 Slimers slime $5 Genie inabottle $5 Adult Capri-Sun $5 Purple Rain Backyard Kitchen & Tap $5 - “Hammered Time” (Shot) Fireball/Crown Apple/Splash of Cranberry $5 - “As If” (Shot) Smirnoff Vodka, Blue Curacao, Lemonade, Pop Rock Rim $6 - “Half Shell Heros” (Drink) Malibu, Melon Liquor, Pineapple Pacific Beach AleHouse $4 - Jolly Rancher Shot Vodka, Watermelon pucker splash of lemonade $5 - "The Nickel-loaded-eon" Skyy Orange, OJ , Sprite splash of Grenadine $5 - "Ohhhh-Yeahhhh" Kool-aid and Vodka Waterbar San Diego $5 - Surfer on Acid $5 - Kamikaze Shots $5 - PBR cans Break Point $5 - Creamsicle Shot $5 - Rootbeer Bottle Cap Shot $5 - Jungle Juice $5 - Pineapple Upside Down Cake El Prez $3 - My Little Poloma Shot $5 - Party Time!! Excellentt!!! Shot $5 - Fresh Drink of Bel Air Cocktail PRICING Early Bird: SOLD OUT GA: $20 SOLD OUT Week-of: $25 Day-of: $30 VIP: $35 SOLD OUT Registration is from 3pm - 5pm at Firehouse Grab your crew, your fanny packs and get ready to party or you can talk to the hand! ✋ This WILL sell out!
[ Unicode ] "အစကတော့ နခွေညျဦး သောကျတာတှလေို့ စိတျဝငျစားမိတယျ။ နောကျပိုငျး cele တှတေျောတျောမြားမြား try ပွီး အဆငျပွတေယျပွောကွလို့ ကိုယျလညျး tryကွညျ့လိုကျတာ။ ကိုယျ့လို သရစောကွိုကျတဲ့လူအတှကျ ပထမ တဈရကျကတော့ အရမျးခကျခဲတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဇှဲလေးမှေးပွီး ၃ရကျအတှငျး detoxနဲ့ အိမျမှာပဲ cardioလေးတှေ တဈရကျကို မိနဈ၂၀လုပျဖွဈတယျ ၃ရကျပါ ။ ၃ရကျတညျးနဲ့ ၆ပေါငျ နီးနီး ကသြှားပါတယျ။ အပေါ့တော့ ခဏ ခဏ သှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ဝမျးဗိုကျထဲက အဆိပျတောကျတှေ ထှကျသှားတယျလို့ ခံစားမိတယျ။ အရမျးအဆငျပွပေါတယျ။ နောကျလညျး ထပျtryဖို့ ရှိပါတယျ။ Thank you so much Jungle❤ " ဒီလိုလေးသခြော feedback ပွနျပေးပွီး recommend လုပျထားတာကတော့ Jungle detox ရဲ့3days juice cleanse plan လေးလုပျပွီး ဝိတျ၆ပေါငျနီးနီးကသြှားတယျဆိုတဲ့ မွဈကွီးနားက Jungle Detoxer ခြောခြောလှလှလေး Rong Rong ပါ။ အခုဆို Juice Cleanse Advanced level ထိ ပွီးလို့ Expert Level တောငျ မှာထားပါပွီ။ Juice cleanse လုပျတဲ့အခါ အဆိပျအတောကျတှေ၊ fat deposit တှေ heavy metals၊ parasites၊ excess water စသဖွငျ့ ရောထှေးကတြာမို့ Cleanse လုပျရငျး ကတြာမွနျနတောကို စိတျထဲသိပျမထားဘဲ detox effect ရဖို့သာ ဦးစားပေးပွီး weight အတှကျကိုက Cleanse program ပွီးတဲ့အခါ dinner plan ၊5&2diet စတာလေးတှနေဲ့ ဖွေးဖွေးမှနျမှနျဆကျသှားစခေငျြပါတယျ။ ခုလို သောကျထားတဲ့ အခွားသူတှဆေီက အတှအေ့ကွုံလေးတှေ ထပျဖတျခငျြရငျလညျး Jungle Detox page မှာ5Stars reviews တှေ 600 နီးပါး ရှိနပေါပွီ။ ဒီReviews နရောလေးမှာ စုစုစညျးစညျးဖတျနိုငျပါတယျ Review>>> https://www.facebook.com/pg/jungledetoxmyanmar/reviews/ မရှငျးတာမှနျသမြှ သိလိုသမြှကိုလညျး chatbox ကနမေေးလို့ရပါတယျ။ Our customer support team will be happy to assist you. ☘️☘️☘️Jungle Detox Program တှအေကွောငျးအသေးစိတျကို ဒီ link လေးတှမှော ကွညျ့ပေးပါနျော။ နယျပေါငျး 100 ကြျောကိုလညျး ရခေဲပုံးတှနေဲ့ ပို့ပေးပါတယျ။ Beginner Level >>> https://www.facebook.com/jungledetoxmyanmar/posts/1939582782988920 Advanced Level >>> https://www.facebook.com/jungledetoxmyanmar/posts/1951377941809404 Expert Level >>> https://www.facebook.com/jungledetoxmyanmar/posts/1969442776669587 Dinner Plan >>> https://www.facebook.com/jungledetoxmyanmar/posts/1987082344905630 Jungle Detox Power Of Nature #jungledetox #powerofnature #whatpeoplesayaboutjungledetox #jungledetox_reviews -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Zaw Gyi ] "အစကတော့ နေခြည်ဦး သောက်တာတွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ နောက်ပိုင်း cele တွေတော်တော်များများ try ပြီး အဆင်ပြေတယ်ပြောကြလို့ ကိုယ်လည်း tryကြည့်လိုက်တာ။ ကိုယ့်လို သရေစာကြိုက်တဲ့လူအတွက် ပထမ တစ်ရက်ကတော့ အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇွဲလေးမွေးပြီး ၃ရက်အတွင်း detoxနဲ့ အိမ်မှာပဲ cardioလေးတွေ တစ်ရက်ကို မိနစ်၂၀လုပ်ဖြစ်တယ် ၃ရက်ပါ ။ ၃ရက်တည်းနဲ့ ၆ပေါင် နီးနီး ကျသွားပါတယ်။ အပေါ့တော့ ခဏ ခဏ သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဝမ်းဗိုက်ထဲက အဆိပ်တောက်တွေ ထွက်သွားတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်လည်း ထပ်tryဖို့ ရှိပါတယ်။ Thank you so much Jungle❤ " ဒီလိုလေးသေချာ feedback ပြန်ပေးပြီး recommend လုပ်ထားတာကတော့ Jungle detox ရဲ့3days juice cleanse plan လေးလုပ်ပြီး ဝိတ်၆ပေါင်နီးနီးကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ မြစ်ကြီးနားက Jungle Detoxer ချောချောလှလှလေး Rong Rong ပါ။ အခုဆို Juice Cleanse Advanced level ထိ ပြီးလို့ Expert Level တောင် မှာထားပါပြီ။ Juice cleanse လုပ်တဲ့အခါ အဆိပ်အတောက်တွေ၊ fat deposit တွေ heavy metals၊ parasites၊ excess water စသဖြင့် ရောထွေးကျတာမို့ Cleanse လုပ်ရင်း ကျတာမြန်နေတာကို စိတ်ထဲသိပ်မထားဘဲ detox effect ရဖို့သာ ဦးစားပေးပြီး weight အတွက်ကိုက Cleanse program ပြီးတဲ့အခါ dinner plan ၊5&2diet စတာလေးတွေနဲ့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ဆက်သွားစေချင်ပါတယ်။ ခုလို သောက်ထားတဲ့ အခြားသူတွေဆီက အတွေ့အကြုံလေးတွေ ထပ်ဖတ်ချင်ရင်လည်း Jungle Detox page မှာ5Stars reviews တွေ 600 နီးပါး ရှိနေပါပြီ။ ဒီReviews နေရာလေးမှာ စုစုစည်းစည်းဖတ်နိုင်ပါတယ် Review>>> https://www.facebook.com/pg/jungledetoxmyanmar/reviews/ မရှင်းတာမှန်သမျှ သိလိုသမျှကိုလည်း chatbox ကနေမေးလို့ရပါတယ်။ Our customer support team will be happy to assist you. ☘️☘️☘️Jungle Detox Program တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဒီ link လေးတွေမှာ ကြည့်ပေးပါနော်။ နယ်ပေါင်း 100 ကျော်ကိုလည်း ရေခဲပုံးတွေနဲ့ ပို့ပေးပါတယ်။ Beginner Level >>> https://www.facebook.com/jungledetoxmyanmar/posts/1939582782988920 Advanced Level >>> https://www.facebook.
[Zawgyi version] Review တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သေချာလေး ရေးတတ်တဲ့ Rachel’s Jungle Detox3Days Juice Cleanse Program full review Hello ☺️ Rachel ဒီတခေါက် sharing လုပ်ပေးမှာက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ Jungle Detox plan လေးအကြောင်းပါ အခုနောက်ပိုင်း Rachel အစားအသောက်တွေစိတ်ရှိလက်ရှိစားမိနေပြီး အပြင်စာတွေလည်းဆက်တိုက်လိုလိုစားဖြစ်နေတာကြာလာတော့ လူကအရင်လိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးမဖြစ်တော့ဘူး။ ဝတယ်ဆိုတာထက် အရင်လိုနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့ပဲ လူက‎ လေးလာပြီး ဗိုက်ဆိုလည်းကယ်ကယ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ အသားအရေဆိုလည်း အဆီဖုလေးတွေထွက်လာပြီး ညစ်လာတယ် ခံစားရတယ်။ တကယ်တော့ skin နဲ့ body နဲ့အမြဲဆက်စပ်နေတာဆိုတော့ ကိုယ်တွင်းအညစ်အကြေးများလာတာနဲ့အမျှ အသားအရေမှာလည်းသိသိသာသာကို effect ဖြစ်စေတာကိုး...အဲ့ဒါနဲ့ စိတ်အလိုလိုက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး Detox plan တခုဝင်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Rachel ဝင်တာက Jungle Detox က (3) Days Juice Cleanse plan ပါ။ အရင်ကတော့ Jungle detox က dinner plan ကို Rachel သောက်ဖူးတယ်။ သောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုရက်တွေ လူကစိတ်အလိုလိုက်ပြီး အစားအသောက်မဆင်ခြင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီး (3) Days juice cleanse plan ကိုပဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Jungle Detox Plan အကြောင်းမပြောပြခင် Detox လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပေးပါမယ် Detox ဆိုတာ? =============== Detox ဆိုတာကိုတော်တော်များများက weight ကျဖို့လုပ်တဲ့အရာဆိုပြီးပဲသိထားကြတာများတယ်။ တကယ်တော့ Detox juice cleanse လုပ်တယ်ဆိုတာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ရက်အပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုအတွင်းမှာ ဆီ၊ ဆား၊ သကြားနဲ့ အခြားအစားအသောက်တွေမျိုးစုံကို တောက်လျှောက်ခြေဖျက်နေရတဲ့ အစာခြေစနစ်တစ်ခုလုံးကို ခဏလေး အနားပေး fasting လုပ်တဲ့သဘောပါ။ ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ သဘာဝ အသီးအရွက် အစေ့အဆံစိမ်း အစုံအလင်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Detox juice လေးတွေသောက်ပေးပြီး Rachel တို့ရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမှာမသန့်စင်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ အဆိပ်အတောက်တွေကို သဘာဝနည်းနဲ့ သန့်စင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲ( အလွယ်တကူပြောရရင်တော့ အူရှင်းပေးတယ်ပေါ့) Weight Loss ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်း အထောက်အကူပေးတယ်ဆိုပေမယ့် Juice cleanse လုပ်တာက တစ်လမှာ ရက်ပိုင်းလောက်ပဲလုပ်ရတဲ့အတွက် တောက်လျှောက်ကျနေဖို့ကို ဒီ3days detox plan သက်သက်ကိုပဲ အားကိုးလို့မရပါဘူး။ Juice fasting လုပ်တာကို ကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်ထုတ် အူရှင်းဖို့နဲ့ ရေဓာတ်၊ အသီးအရွက်စိမ်းဓာတ်ဖြည့်ဖို့ အဓိက ဦးစားပေးလုပ်ပြီး Weight Loss အတွက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်အစားအသောက်နဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအစရှိတဲ့ Lifestyle တခုလုံးကိုပါ သေချာပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ Detox juice cleanse လုပ်ပေးသင့်လဲ? ============================== တနေ့တာမှာ အသီးအရွက်သိပ်မစားဖြစ်တဲ့သူတွေ၊ Rachel လို Fast Food အစားများတဲ့သူတွေ၊ Body weight ထိန်းချင်တဲ့သူတွေ၊ အသားအရေကို ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင် Juice cleanse program အပြည့်ကို နှစ်လ သုံးလတစ်ခါလောက်လုပ်ပေးသင့်ပြီး ကြားရက်တွေမှာလည်း Detox juice လေးတွေ ပုံမှန်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ Detox juice cleanse လုပ်တဲ့အကျိုးကတော့ အူတွင်းကမသန့်စင်တဲ့အညစ်အကြေး၊ အဆိပ်အတောက်တွေကို သဘာဝနည်းနဲ့စွန့်ထုတ်ပေးတာဆိုတော့ ဝမ်းမှန်စေတယ်၊ရေဓာတ် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ပြည့်စေတယ်၊ အသားအရေကြည်လင်ပြီး အဆီအချို့လည်းကျစေတယ်။ သီးရွက်စိမ်းတွေ အများကြီး စားဖြစ်သွားတာကြောင့် ကိုယ်တွင်း pH balance ကိုလည်း မျှမျှတတဖြစ်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတယ် Jungle Detox ကိုရွေးဖြစ်ခဲ့တာက? ============================= Detox Juice Brand တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ Rachel Jungle Detox ကိုရွေးဖြစ်ခဲ့တာက (1) သူ့ရဲ့ review တွေကြောင့်ပါ...သူ့ page မှာဝင်ကြည့်လိုက်ရင် Good reviews တွေက 400 ကျော်၊ 500 နီးပါးလောက်ကိုရှိပါတယ်။ အဲ့ထဲ Rachel သူငယ်ချင်းတွေလည်းပါတော့ သွားမေးကြည့်ပြီး တကယ်ကောင်းတယ် try ကြည့်ကြည့်ပါဆိုလို့ Jungle Detox ကိုရွေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ (2) နောက်တခု Rachel ကြိုက်တာက Jungle detox မှာ Flavour အစုံရှိတယ်။ ကိုယ်မကြားဖူးမမြင်ဖူးတဲ့ အသီးအရွက်တွေအစုံကိုမှ Cold pressed method နဲ့ သေချာလုပ်ထားတဲ့ 100% အသီးအရွက်စိမ်းကြိတ်ရည်တွေပဲဆိုတော့ အရမ်း fresh ဖြစ်တယ်။ Rachel plan ၃ရက်ဝင်တာ တနေ့မှ အရသာထပ်သွားတာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် Detox ဆိုတဲ့အတိုင်း အရသာကိုဦးစားပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ detoxification process ကိုအထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့ အာနိသင်ရှိဖို့ကို ပိုပြီးအလေးပေးတာတွေ့ရတယ်။ သောက်မယ့်နေ့မတိုင်ခင်ညမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လုပ်ပြီး လာပို့ပေးတာဆိုတော့ Fresh အရမ်းဖြစ်ပြီး Authentic အရမ်းဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် (3) Packaging ကလည်းအရမ်းသေသပ်တယ်။ သူ့နာမည်လှလှလေးတွေကိုက လူ့ကိုသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာစေတယ်။ အရောင်လေးတွေကလည်း စုံနေရော (4) သူ့ရဲ့ Quality က Premium ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Customer care ပဲ...customer က
Buy one get one FREE for Shh! We haveaplan. Three determined characters plot the capture ofabeautiful bird along with pantomime, puppetry, and music to engage children as young as three in the magic of the theatre.
From Toddlers to Performance Athletes, Layers for the Whole Family
Con Tarjetas de Crédito Citibanamex tienes accesoalas mejores Preventas. Si aún no la tienes, ¿qué esperas?
RESULTADOS VISÍVEIS A PARTIR DA PRIMEIRA NOITE! 90% das manchas são corrigidas 96% pele mais luminosa